स्वाधीनता र सार्वभौमबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ - Online Majdoor
स्वाधीनता र सार्वभौमबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ
कालापानी नेपालकै भूभाग हो । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि हुन् । नेपालको भूमि नेपालको नक्सामा कोरिएको छ भने सीमा समस्या समाधान गर्न ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणको खोजी गर्नुपर्ने विषय अहिलेको होइन । दस्तावेज र तथ्यकै आधारमा सो भूमि नेपालको थाहा हुँदाहुँदै भारतले बनाएको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि किन भारतमा गाभ्ने काम ग¥यो ? काश्मीर टुक्राएर नयाँ दुई अलग राज्य बनाएपछि भारतले हालै नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । उक्त नयाँ नक्सा भारतले नेपाल सरकारको नाडी छामेको हो । नयाँ नक्सामा सरकार र नेपाली जनता मौन रहेका भए भारतले सो नेपाली भूमिलाई आफ्नै भूमि बनाएरै छाड्नेमा शङ्का छैन ।
भारतले पहिले सुस्ता पनि मिचेको थियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा पनि मिचेकै हो । उहिलेदेखि त्यहाँ भारतीय सेना तैनाथ गरिएको हो । नेपाली भूमिलाई भारतले किन विवादित भूमि भनेर कचिङ्गल गरिरहेको हो ? नेपाली भूमिलाई विवादित भनेर आफ्नो भूमि बनाउने भारतको प्रयासलाई नेपाल सरकारले खासै प्रतिवाद गर्ने काम गरेन । नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्य गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले प्रयास नगरेकै कारण भारतले आफ्नो भूमि भनी दाबी गरिरहेको हो । नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग स्पष्ट पारिसकेपछि अब ती भूमाग नेपालकै भूभाग बनाउन विवाद अन्त्य गर्ने पहल नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ ।
जनताले दबाब दिएको भरमा सरकार बिउँझिने होइन । सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेरमात्र हुँदैन नेपाली भूमि कायम गर्नेतर्फ नै अघि बढ्नुपर्छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राख्नु गलत भएको विचार व्यक्त गरेर सरकार र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सन्तोषको स्वास फेर्ने होइन । अन्य राजनीतिक दल र जनताले विरोध गरेपछि र जनताको दबाब बढेपछि आन्दोलनको स्वर शिथिल पार्न र लोकपत्यारको लागि नेपालकै भूमि भनेर पछि सरकार मौन रह्यो या कूटनीतिक पहल गरिएन भने विरोधको के अर्थ हुन्छ ? विगत लामो समयदेखि सरकारको यस्तै क्रियाकलापले गर्दा भारतले जग्गा अतिक्रमण गर्ने र त्यसलाई विवादित क्षेत्र भनेर आफूले कब्जा गरिरहेको हो । ‘विवादित’ क्षेत्र नै हो भने त्यहाँ भारतीय सेना या सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति किन ? विवादित क्षेत्रमा भारतीय पक्षले किन खनजोत गरिरहेको हो ? विवादित जग्गामा भारतको कब्जा किन ? नेपालको भूमिमा भारतीय सेनालाई खेद्नुपर्छ, नेपाली भूमिमा नेपालीले खनजोत गर्नुपर्छ । सीमा विवाद अन्त्य गर्न सीमा नियमन गर्नुपर्छ ।
ठूला र शक्तिशाली सरकारसामु नेपाल सरकारले बोल्न नसकेको हुँदा, बोल्ने आँट नगरेको हुँदा र अडानमा नबसेको हुँदा भारतले नेपाललाई थिचोमिचो गरिरहेको हो, अतिक्रमण गरिरहेको हो, दबाब दिइरहेको हो, दासको जस्तो व्यवहार गरिरहेको हो । भारतले नेपाललाई सधैँ आफ्नो उठबसमा राख्ने प्रपञ्चको नेपाल सरकारले विरोध नगरेसम्म भारतले नेपाललाई हेपिरहने छ, आफ्नो उठबसमा राखिराख्ने छ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताबारे नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ । सचेत नभएमा सीमा विवाद लम्बिरहने छ र विवादित जग्गामा आफ्नै जग्गा भनेर भारतले कब्जा गरिरहने छ । नेपाली भूमि नेपालको बनाउन या मुलुकलाई सार्वभौम बनाउन भारत सरकार नमानेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको मुद्दा बनाइनुपर्छ ।
कुलु ः नेवार जातिको एक शिल्पी समुदाय